2019-08-22 | Job Vacancy in Myanmar
Daily Archives: 2019-08-22
2019-08-22 06:29:47 , Please admin #Accounting_Trai…
💼 Accounting နယ်​ပယ်​မှာ အခုမှ စလုပ်​မည့်​သူများ
💼အလုပ်​ခွင်​တွင်​ Accounting ဆိုင်​ရာ ထပ်​မံသိချင်းသူများအတွက်​ ရည်​ရွယ်​ပါတယ်​
အဲ့လို​အတွက်ေ​ကျာင်းစည်းကမ်း​တွေကို​တော့ ​အောက်​မှာဖတ်​​ပေးပါရှင်​ 👇👇👇
Sunday only( section A)
1.9.2019 (Sunday only)
Time: 3:00 to 6:00am⏰⏰
✔လုပ်​ငန်းခွင်​တွင်​ အသုံးပြု​နေ​သော စာရွက်​စာတမ်းများ📝📄
📝-cash book ​ရေးသွင်းပုံ
📝-payment list စာရင်းသွင်းပုံ
📝-stock (Inventory) ကုန်​ပစ္စည်း အဝင်​ အထွက်​စာရင်း
စတဲ့ လုပ်​ငန်း ခွင်​ လက်​​တွေပါ Trainningများ
📝-TAX Knowledge အခွန်​ပညာဆိုင်​ရာများ
အခွန်​ပါရပ်​သည်​ လက်​ရှိစီးပွား​ရေးတွင်​ မရှိမဖြစ်​သိသင့်​လာ​သော ပညာရပ်​ထဲတွင်​ တစ်​ခုပါဝင်​လာပြီ ဖြစ်​​သော​ကြောင်း Tax နဲ့ ပတ်​သက်​​သော အမျိုးအစားများနဲ့ သက်​မှတ်​ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အခွန်​​ဆောင်​ရမည့်​ပုံစံ​တွေကို ရှင်းပြ​ပေးမှာဖြစ်​ပါတယ်​
�-Export and Import ဆိုင်​ရာ Knowledge များ
📝-Motivations Training များ
✔ -customer service Trainning,🙋
အလုပ်​ငန်းခွင်​​ရောက်​တဲ့အခါ ကိုယ့်​လုပ်​ငန်းနဲ့ ဆိုင်​တဲ့ customer ​တွေနဲ့ စကား​ပြောဆက်​ဆံအခါ ဘယ်​လို​ပြောရမယ်​ ဘယ်​လိုစကားလုံး သုံးနှုန်းရမယ်​ဆိုတာ​တွေ လမ်းညွှန်​​ပေးတဲ့ trainning ပါ
✔ -Telephone ​ပြောခြင်းဆိုင်​ရာ service Trainning☎☎
ဖုန်း​ပြောတဲ့အခါ တစ်​ဖက်​လူကို မမြင်​ရတာ​ကြောင့်​ မိမိစကား​ပြောဆို ​က အသံ​အ​နေအထားအ​ပေါ်တစ်​ဖက်​လူက ​ကောက်​ချက်​ချ​ပေးတာ​ကြောင့်​ Telephone ​ပြောတဲ့အခါ ​ပြောရမယ့်​ အသုံးအနှုန်း​တွေကို လမ်းညွှန်း ​ပြောပြ​ပေးတဲ့ Trainning ပါ
✔ -အပြင်​ english စာ ​လေ့လာ​ပုံ​
✔ -Email ပို့ခြင်း email အ​ကောင့်​ဖွင့်​​ပေးခြင်းများ အပါအဝင်​ google မှ စာ​လေ့ပုံ​တွေပါ လမ်းညွှန်​​သင်​ပြ​ပေးပါတယ်​
#သင်​တန်းပြီးသွားရင်​ အလုပ်​ရှာ​နေသူများအတွက်​ အလုပ်​ပါ ရှာ​ပေးပါသည်​
၄​သောင်း ၅ထောင် ကျပ်​
(Exercise Book , Pen , File ) each
Present များ​ပေးပါတယ်​ 🎁
2.​ပေးလိုက်​​သော အိမ်​စာ​တွေကို အိမ်​စာ စာအုပ်​သီးသန့်​ထားရှိ​ပြီး အိမ်​စာလုပ်​လာခဲ့ရပါမယ်​
3. အိမ်​စာ စာအုပ်​​တွေကို အတန်းမစခင်​ ခုံ​ပေါ်မှာ ထပ်​​ပေးထားရပါမယ်​ ​အိမ်​စာမလုပ်​လာတာ အိမ်​စာ စာအုပ်​​မေ့ကျန်​ခဲ့သူများကို fine ​ကောက်​ပါမယ်​ (3ကြိမ်​အထိ စာမလုပ်​လာပါက သင်​တန်း​ကျောင်းမှ လက်​ခံ​တော့မည်​မဟုတ်​ပါ)
4. မလိုက်​နိုင်​တဲ့ စာ​တွေရှိရင်​ viber group ထဲမှာ စာ​မေးစာ​ဖြေလုပ်​လို့ရပါတယ်​
5. ​ကျောင်းမလာဖြစ်​ရင်​ ခွင့်​တိုင်​​ပေးပါ အတန်းပျက်​သွားတဲ့စာ​တွေအတွက်​ အချိန်​ပို​ခေါ်ရင်​လာနိုင်​ရပါမယ်​
6. ​ကျောင်းသင်​တန်း ခွင့်​မတိုင်​ပဲ ၂ကြိမ်​ ပျက်​ရင်​ စာလုံးဝပြန်​မသင်​​ပေးပါ
#သင်​တန်းပြီးဆုံးပါက certificates များ ​ပေးအပ်​ချီးမြင့်​မှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​
​ကျောင်းမှာ test 1ကြိမ်​ ​ဖြေဆိုရပါတယ်​ 1ကြိမ်​မှာ အမှတ်​အများဆုံးရရှိသူများ ​ကျောင်းတက်​မှန်​သူများကို အမှတ်​တရ ဆုများနှင့်​ ချီးမြှင့်​​ပေးမှာလဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ 🏆🏆
အမှတ်​ ၈၆၀.ထူပါရုံ ၁၄လမ်းအ​နောက်​ သာ​ကေတမြို့နယ်​
တိုက်​ A -5လွှာ
Phone- 09-974540895( with viber)
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-22 by admin.
#Yangon Head Office Showroom … ,2020-02-26 01:10:35
Location : HLAINGTHARYAR FERR… ,2020-02-26 01:09:47
အရောငျးဝနျထမျး အမွနျအလိုရှိသညျ… ,2020-02-26 01:09:39
Lewar Myanmar Co.,Ltd. Sr Acc… ,2020-02-26 01:07:18